Ziziphi iingenelo ze-L-carnitine kunye ne-L-carnitine powder? | AASraw
/Blog/L-carnitine/Ziziphi iingenelo ze-L-carnitine kunye ne-L-carnitine powder?
ezaposwa ngomhla 12 / 25 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo L-carnitine.
1.Yintoni i-L-carnitine kunye ne-L-carnitine powder? 2.Iindidi ezahlukeneyo ze-carnitine?
3.I-L-carnitine isebenza njani emzimbeni? 4.Usebenzisa njani i-Sildenafil Citrate / Viagra?
5.Kunjani ukuba ndithathe uL-carnitine? 6.Ziziphi iziphumo ezichaphazelekayo ze-L-carnitine?
L-carnitine powder eluhlaza (impahla) ividiyo
|. Izinto ze-L-carnitine Abalinganiswa basisiseko:
I-molecular Formula: C7H15NO3
Isisindo somzimba: 161.2
1.Yintoni i-L-carnitine kunye ne-L-carnitine powder?
L-carnitine i-amino acid (isakhiwo sokwakha iiprotheni) esenziwe ngokwemvelo emzimbeni.-i-carnitine inceda umzimba uvelise amandla. Kubalulekile kwintliziyo kunye nokusebenza kwengqondo, ukunyakaza kwemizimba kunye nezinye iinkqubo zomzimba.
I-L-carnitine izongezo zisetyenziselwa ukwandisa amazinga e-L-carnitine kubantu abanomgangatho wendalo we-L-carnitine ophantsi kakhulu ngenxa yokuba baneengxaki zemfuzo, bathatha iziyobisi ezithile (i-valproic acid ngenxa yokubanjelwa), okanye ngenxa yokuba bafumana inkqubo yonyango (i-hemodialysis yesifo sesifo) esisebenzisa i-L-carnitine yomzimba. It isetyenziselwa njengenkxaso yokubuyisela endaweni yezityalo ezidityanisiweyo, i-dieters, kunye nobunzima obuphantsi okanye iintsana ezingaphambi kwexesha.
L-carnitine isetyenziselwa iimeko zentliziyo nempahla yegazi kuquka iintlungu ezinxulumene-intliziyo esifubeni, ukusilela intliziyo congestive (CHF), iingxaki intliziyo sisifo ekuthiwa isifo somqala omhlophe, isifo sentliziyo, iintlungu umlenze zibangelwa iingxaki ejikeleza (claudication uveza), kunye cholesterol ephezulu.
Abanye abantu basebenzisa i-L-carnitine ngenxa yokuphazamiseka kwemisipha ehambelana nemithi ethile ye-AIDS, ubunzima bokuzala umntwana (ukungabikho komntwana), ingxaki yokuphuculwa kwengqondo ebizwa ngokuba yi-Rett syndrome, i-anorexia, isifo esingapheliyo sesifo sikashukela, isifo sikashukela, i-thyroid engasebenzi, ukunqongophala kwengxaki-ingxaki yokuxhatshazwa (ADHD) ), umlenze wesilonda, isifo seLyme, kunye nokuphucula ukusebenza kwezemidlalo kunye nokunyamezela.
Umzimba unokuguqula i-L-carnitine kwenye i-amino acids ebizwa ngokuthi i-acetyl-L-carnitine kunye nepropionyl-L-carnitine (541-15-1). Kodwa, akukho mntu uyazi ukuba iingeniso ze-carnitines ziyazitshintsha. Kuze kube yinto eyaziwayo, musa ukufaka enye ifomu ye-carnitine kwenye.
I-L-carnitine powder, kunye ne-L-carnitine impahla eluhlaza, yinto engundoqo ye-L-carnitine, i-powder yecristalline emhlophe, Inombolo ye-CAS yi-541-15-1. Elinye igama likaL-carnitine yi-3-carboxy-2-hydroxy-N, N, N-trimethyl-1-propanaminium ityuwa yangaphakathi, (i-3-carboxy2-hydroxypropyl) i-trimethylammonium hydroxide yangaphakathi ityuwa, i-3-hydroxy-4-N- i-trimethylaminobutyrate, i-B-hydroxy-N-trimethyl aminobutyric acid, i-Beta-hydroxy-gamma-trimethylammonium butyrate, i-B (t) i-Factor, iCarnitine, iCarnitor, i-D-Carnitine, i-DL-Carnitine, i-Facteur B (t), i-L-3-hydroxy -4- (trimethylammonium) -butyrate, Levocarnitine, Lévocarnitine, Levocarnitine Fumurate, i-L-Carnitina, i-L-Carnitine i-Fumarate, i-L-Carnitine i-Tartrate, i-L-Carnitine iTartrate, (R) - (i-3-carboxy-2-hydroxypropyl) i-trimethylammonium hydroxide, (R) -3-hydroxy-4-trimethylammonio-butyrate, i-Vitacarn, i-Vitamin B (t), i-Vitamine B (t).
I-197-212 ℃, i-2 ℃, i-8 ℃, i-solubility H2O: 0.1 g / mL kwi-20 ° C, icacile, ingenambala. L-carnitine impahla eluhlaza inokusetyenziswa ukwenza isisindo sokulahlekelwa kwekhofi, i-capsule yokulahlekelwa kwesisindo kunye nezinye izinto zokusebenza. Kodwa indlela yokuthenga i-L-carnitine powder? Kulula ukufumana umthengisi we-L-carnitine powder online, kodwa akuthethi ukuba yonke umthengisi we-L-carnitine powder anika umgangatho ophezulu. Uninzi lwe-L-carnitine umthengisi we-powder yinkampani yokurhweba, kungekhona umenzi, ngoko abanakukwazi ukulawula kakuhle umgangatho. Ngokuqinisekileyo intlawulo ayiyi kulungileyo. Indlela yokuchonga Umthengisi we-powder L-carnitine lungile okanye akunjalo? AASraw icebisa:
3.) Ngaba i-steroids i-powder legit eChina?
Ezinye zikhona kwaye ezinye azikho. Ingxenye ye-steroid powder eluhlaza emhlabeni jikelele ayilungelo lokuvelisa, ukuthutha, ukuloba, ukupheka, okanye ukuthengisa. Kodwa, e-China, ziyimashishini ebomvu. Kodwa, ezinye iimpahla ezifana ne-Testosterone Inathate, Testosterone Cypionate, i-SARMS, i-Letrozole, ifowuni inemvume yezomthetho yokuyivelisa.
I-4.) Ungayifumana njani indlela yokuhlambulula i-powder powder?
Kukho iindidi zamaphepha ukusuka kumashishini kunye namabhabhi esithathu anganikezelwa
5.) Indlela yokukhusela ulwazi lwabaxhasi
Bamele basebenzise i-imeyile esemthethweni ukuba baqhagamshelane nabo bonke abathengi, abangafani ne-gmail, yahoo, okanye enye idilesi ye-imeyile yoluntu. Yaye ungaxeleli abathengi ukuba utshintshe idilesi yemial ukudibanisa. Ukuba ufumana ulwazi olulolo hlobo, kufuneka uqaphele ukuba i-imeyli ye-scam.
Kakade, i-whatsapp kunye ne-skype contact iya kulungeleka, kodwa iya kwenziwa kuphela ngumnxeba wenkampani.
6.) Iphakheji kunye nendlela yokuhambisa
Kwiphakheji kunye nendlela yokuhambisa, yonke imithombo yendalo eluhlaza inendlela zazo. Kodwa indlela yokuhambisa kunye neendlela zokuhambisa kufuneka kuqinisekiswe ukukhutshwa kwesiko.
7.) Ixesha lokuhlawula
Umthombo okhulayo kufuneka unike ixesha lokuhlawula elikhusela ulwazi lwabaxumi.
Siyakwamkela uqhagamshelwano AASraw ngolwazi olungakumbi lwe-informaton.
2. Iindidi ezahlukeneyo ze-carnitine?
L Carnitine powder eyaziwa ngokuqhelekileyo ukunceda umzimba uvelise amandla ngokukhupha amafutha e-fatty, okuye kwathiwa ukunceda ukulahlekelwa yintlungu. Ngokuqhelekileyo iphosakele nge-amino acid kodwa empeleni ihlanganiswe emzimbeni ukusuka kuma-amino acids, i-lysine kunye ne-methionine.
L Carnitine ikhiqizwa esibindi kunye nezintso ngaphezu kokufumaneka kwimithombo yezilwanyana - inyama ebomvu kunye nobisi-kwaye ngokufanelekileyo, ifom yefom.
Nazi ezinye iindidi ezininzi ze-carnitine:
● Ipropionyl-Carnitine: Le fomu ifanelekile imiba enxulumene nokuhamba ngegazi ezifana nesifo se-vascular and circular blood pressure. Ingasebenza ngokuveliswa kwe-nitric oxide, ephucula ukuhamba kwegazi.
● I-D-Carnitine: Le fom engasebenziyo inokubangela ukungabi nakumzimba emzimbeni womntu ngokunqanda ukutyunjwa kwamanye amafomu ancedo.
● I-Carnitine L-Tartrate: Le yenye yeefom eziqhelekileyo ezitholakalayo kwizongezelelo zezemidlalo, ngenxa yokulinganiswa kwayo ngokukhawuleza. Unokukunceda ngezinto ezinxulumene nomzimba ezifana nobuhlungu besisu kunye nokubuyiselwa.
● I-Acetyl-L-Carnitine: Ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yi-ALCAR, oku mhlawumbi ifomu efanelekileyo kakhulu yengqondo. Kungasetyenziselwa ukunyanga iimeko ze-neurological ezifana nesifo se-Alzheimer.
3. L-carnitine isebenza njani emzimbeni?
L Carnitine ngokuyinhloko igxininise kwiishues ezixhaphaza kakhulu i-fat for energy, njenge-skeletal and heart muscle (umz. Biceps kunye nentliziyo).
Yenza njengobhuloho beetyali ezide ezikutya (kubandakanywa nezinto ezimbi) ukuba ziqhutywe kwiiseli ezincinci, zokuqoqa izithuku ngaphakathi kweeseli ezinkulu, ezibizwa ngokuba yi-mitochondria.
Le nkqubo iqulethe i-fatty acids ibe i-metabolised (ephukile phantsi) ukuyisebenzisa njengamandla, okanye njengemidlalo emininzi-abantu bayayikubona-i-fuel for exercise exams.
Kuye kwahluke ngokuthe ngqo kwi-acide chain / efutshane mfutshane yamacidi e-acids angakwazi ukungena ngokusesikweni kwiseli.
Njengoko unokucinga, ukuba nomlinganiselo okwaneleyo we-Carnitine emzimbeni wakho unokuthintela ngokukhawuleza ukuphazamiseka kwemizimba kunye nefuthe elihle kumanqanaba angakhuthazayo, okubangelwa ukungabikho kwamandla-nokuba ungumakhi womzimba, umdlali wezemidlalo okanye u-gym goer!
Isitoreji esilondoloziweyo se-non-essential amino acid sinokukunceda ukuguqulwa kwamanqatha ukutshisa:
Uninzi L Carnitine = I-fuel training ngaphezulu = Iziphumo ezingcono!
Nangona kungekho zifundo zibonakalise iziphumo ezichanekileyo zokulahleka kweoli, uL Carnitine uye wafunyanwa ekuthandeni umsebenzi owenzayo, obangela ukunyamezela kokusebenza!
4. Ziziphi iingenelo ze-L-carnitine?
● Ukulahleka kwempahla
I-Carnitine yitshisa elidumileyo leoli ngoba lijongene nokuthuthwa kwamafutha kwiiseli ukuba kusetyenziswe amandla emzimbeni. Ngokuphakamisa izinga le-muscle carnitine, uxhasa inkqubo yokutshisa i-fat, kwaye ngenxa yokuba umzimba wakho uphumelela ngakumbi ekuqhubeni uphethiloli, kuya kwandisa amanqanaba akho.
Ukuphakamisa i-carnitine kuya kuphucula ukusebenza komzimba ngokutshisa amaninzi amaninzi, ukukhupha i-glycogen, ukucima i-lactate ye-muscle kunye nokuphucula ama-hormone.
● Ukunyuka kwezemidlalo
Iingxoxo zokuphucula ukusebenza ziphantsi kwe-L Carnitine ukukwazi ukwandisa i-metabolism yamaseli enamafutha, okudala amandla angakumbi okuvumela ukuba wenze umthambo ophezulu kwixesha elide, ngelixa uvelisa i-lactic acid. Ngenxa yendima yeCarnitine ekuthuthiseni ama-acids amanqindi kwiiseli ukuba i-oxidised, (itshiswe ngamandla) ihlolwe kwizifundo eziliqela ukubonelela umphumo onokubumba komzimba - oku kungenxa yokuba kunokwenzeka ukuba inokunceda ukusetyenziswa ngamandla kwixesha elide kwaye udlale inxaxheba ekunyuseni kokutshisa.
● Ukwandisa amandla oMsebenzi
Enye inzuzo yokuphakamisa amanqanaba e-carnitine kukuba uya kuba nomsebenzi omkhulu, kodwa akayi kuva ngathi kunzima. Uyakwazi ukuphakamisa ubunzima obuninzi, uhlawulele kwakhona i-reps, okanye usebenze ngokukhawuleza nangaphezulu, kodwa ngokukhululeka.
Oku kungenxa yokuba amanqanaba aphezulu e-muscle carnitine anceda ukunciphisa intlungu, ukulimala kwemisipha, kunye neempawu zokuxinezeleka kokuxilongwa komzimba ovela kwi-high-intensity exercise ngokunciphisa i-lactic acid production.
Inqanaba eliphezulu le-carnitine landisa umkhiqizo wamandla, kodwa linomphumo wokukhawuleza ukuqhuma kwe-muscle ngokugcina i-pH ye-muscle kunye nokunciphisa ukuqokelela kwe-hydrogen ions. Ngokwenene, i-carnitine inceda ekupheliseni i-products yovavanyo oluvakalayo olubangela intlungu kunye nokulimala kwemisipha (ukutshisa unokuziva xa uqeqesho lukhuni), kukuvumela ukuba usebenze nzima.
KwiNcwadi ye-Physiology study, iziphumo zibonisa indlela amanqanaba e-muscle aphezulu aphakamisa ngayo amandla omsebenzi ngokunciphisa ukuqokelela kwe-lactate kwimisipha. Ukulandela i-bout yomsebenzi kwi-80 yeepesenti ye-maximal, i-muscle lactate buildup yayingu-44 ekhulwini kumathathi-nxaxheba abongezelela nge-carnitine xa kuthelekiswa neqela lolawulo.
● Ukuphucula impilo kunye nokuphila kakuhle
Thatha i-carnitine ukukhawuleza kokuphucula okufutshane kunye nexesha elide ekuqeqesheni okuqinileyo kwaye uya kuba neentlungu ezincinci, ukukhathazeka, kwaye uzive unamandla ngakumbi. I-muscle lactate buildup yinto ekhuselayo eyenza ukuvimbela ukusebenza kwaye ibangela intlungu yesisu, oku kuthetha ukuba xa uvelisa ngaphantsi kwaye uyakwazi ukucoca ngokukhawuleza, uya kuphucula ngokukhawuleza. Ukuthatha i-carnitine kuya kunika inkxaso impendulo ye-anabolic ekusebenziseni ngokulawulwa kwe-androgen receptors, eya "kukunceda ukuxoxisana ngokukhawuleza," ngokutsho kwelinye iqela lophando.
UL Carnitine inendima ekuthintelo / unyango lwemiba ethile yempilo enjengokuhluleka kwentliziyo, i-angina, isifo sesifo, isifo sengqondo kunye nokunyamezeka (ewe ukukhuluphala komzimba kuyinkinga yempilo!)
5. Ndingakanani na ukuthatha i-L-carnitine?
Okucetyiswayo I-L-carnitine I-500-2000mg ngosuku - oku kungathathwa ngamaxesha ahlukeneyo emini kuxhomekeke kwisizathu sokusebenzisa isongezelelo-nangona kunjalo, kuvame ukuba kunconywe ukuba kudle phakathi kokutya.
Kulabo bawusebenzisa ngenxa yezizathu zokusebenza, kukulungele ukuthatha i-30-60 imizuzu ngaphambi kokufunda.
Iimpazamo zokulahlekelwa ngamafutha, ezinye zibonisa ukuba zidla i-Carnitine emva kokuhamba, kodwa, inokuthi ithathwe yonke imini, phakathi kokutya njengoko kuthethwe ngaye-nakwiindawo zokugawulwa kwempahla (umz. 1g kwiifomsile ze-2 / 1g powder, ekuseni, kusasa nobusuku / ntambama nobusuku).
6. Ziziphi iziphumo ezibi zeL-carnitine?
The nemiphumo emibi yeL-carnitine, abanye abantu banokuziva bangakwazi ukuphumla, ukulala, kunye nokuba mhlawumbi i-heartbeat erratic. Ezi ziphumo zecala ziya kugxininiswa xa uthatha okungaphezulu kwamaxabiso anconywayo.
Imiphumo efanayo iyaqatshelwa ukuba ithathelwa ngokukhawuleza ukulala ngexesha lokulala. Imiphumo emibi ingabandakanya intloko yesantya, isicathulo, okanye isisu.
I-L-Carnitine powder i-amino acid echaphazelekayo kwiinkqubo ezininzi ze-biological emzimbeni. Eyona nto, inceda nge-metabolism efanelekileyo yeoli, yintoni eyenza ukuba yenziwe ngabantu ngokukhawuleza. Ulwazi olutshanje lubonisa ukuba lubandakanyeka kwiinkqubo ezininzi ezichaphazela ingqondo, amandla kunye nempilo yesondo yabantu. I-Carnitine inokufumaneka kwisondlo esiqhelekileyo kwaye iphezulu kakhulu emzimbeni obomvu. Sekunjalo, ngokuqhelekileyo iboshwe kwezinye i-amino acid kwaye ifakwe kwisistim esichasene nokusetyenziswa njengesongezelelo.
Kufuneka uyazi amaqiniso ngaphambi kokuba uthathe i-sildenafil citrate powder	I-Clomiphene citrate powder eluhlaza: Ngaba kunokwenzeka ukuba ukhulelwe ngokukhawuleza ngeComomiphene citrate?